Wasiirka amniga ee Puntland waa difaacaynaa jiritaanka iyo Midnimada Puntlland
Wasiirka amniga ee Dowladda Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan ayaa dhawaan waxaa uu ku qabtay shir jaraa’id Hotel Pano Rama ee magaalada Boosaas isagoo shirkiisa jaraa’id uga hadlay xaalada siyaasadeed ee ka jirta Puntlland waxaan uu dhaleecayn u soo jeediyey kooxo uu ugu yeeray qaswadayaal oo gacan saar la leh ururka Al-shabaab iyo argagixisada caalamiga.
Wasiirka amniga ee Dowladda Puntland Col. Khaliif Ciise ayaa ku nuuxnuuxsaday in ay ka hortagi doonaa cid walba oo isku dayda in ay khalkhal galiyaan amaanka Puntlland una aqoonsan doonaa kuwa gacan saar la leh kooxda ururka Al-shabaab, wasiirka amniga ayaa ku celceliyey in ay difaaci doonaa jiritaanka iyo midnimada Puntlland.
Wasiirka amniga ee Dowladda Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan ayaa sidoo kale sheegay in dowlladu ay masuul ka tahay nabadgelyada iyo sugida amaanka degaanada Puntllad qofna aysan mari uga ahayn howsha loo igmaday iyo weliba Shareecada Islaamka maadaama ay dadka iyo dalka Soomaaliya ay yihiin Muslimiin.
Shirka Jaraa’id ee Wasiirka amniga ee Dowladda Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan ayaa ku soo beegmay ka dib markii saaka lagu arkay xarumaha dowllada iyo goobo kale duwan o ka tirsan Boosaaso iyo Gobolka Sanaag ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta , ciidanka Badda oo aad u hubeysan.
Dib ayaan dinkaga soo gudbin doonaa shirka Jaraa’id ee Wasiirka amniga ee Dowladda Puntland Col. Khaliif Ciise Mudan